दोलखाबाट नयाँ टेलिभिजन प्रशासरण हुँदै - egaurishankar.com – gaurishankar himal, dolkha khabar, dolakha news garushankar news, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video
दोलखाबाट नयाँ टेलिभिजन प्रशासरण हुँदै
चरिकोट–दोलखा मिडिया प्रा.लि. दोलखाको दोस्रो वार्षिक उत्सव शनिवार भीमेश्वर नगरपालिका स्थित हरियाली चम्पुजापार्क दोलखामा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको छ ।
वार्षिक उत्सवको अवसमा दोलखा मिडिया प्रा.लि. दोलखाले गत वर्षबाट सञ्चालन गरिरहेको ईगौरीशंकर अनलाईन र दैनिक पत्रिका दिक्षणमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई विभिन्न विद्यामा पुरस्कृत गरेको छ ।
पुरस्कृत हुनेहरुमा सुचना प्रविधितर्फ कवि न्यौपने र सौगात थापा, उत्कृष्ट डिजाईनर रसिन श्रेष्ठ र उत्कुष्ट मिडिया अवार्ड कृष्ण प्रिया बस्नेतलाई प्रदान गरीएको छ ।
वार्षिक उत्सवको अवसरमा दोलखा मिडिया प्रा.लि. दोलखाका अध्यक्ष राजेन्द्र मानन्धरले दोलखा मिडिया प्रा.लि.ले केहि दिनमानै गौरीशंकर टेलीभिजन प्रसारण गर्न लागिएको जनाकारी गराए । जिल्लामानै पहिलो पटक टेलिभीजन प्रसारण गर्न लागेको र टेलिभीजनले दोलखाको धार्मिक संस्कृतिको मौलिकतालाई जोगाई राख्न सहयोग पुग्ने समेत वताए । त्यस्तै महाप्रवन्धक सुन्दर कार्कीले मिडियाहरुलाई व्यवसायी बनाउनका लागी आफुहरु लागी परेको वताए । प्रालीका सदस्य श्यामकृष्ण कायस्थले आजको युग संञ्चारको युग भएकाले संञ्चारको क्षेत्रमा लागनी गर्नुपर्ने वेला भएको वताए । त्यस्तै अर्का सदस्य दिनेश बस्नेतले पत्रकारीतामा निष्पक्षता नभएको भन्दै उनले निष्पक्ष पत्रकारीता गर्न उदाहरण बनाउने भुमिका दोलखाका मिडिया प्रालीले खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै मिडिया प्रालीका सदस्य पर्शुराम थापाले प्रालीको स्थापना नै दोलखामा टेलिभिजन खोल्ने उद्देश्य लिएको भएपनि भूकम्पका कारण केहि ठिला भएको वताए । सदस्य सुमन थापाले स्थापन सुरु गरीन लागेको टेलिभिजन व्यवसायिक तरीकाले संञ्चालन गर्ने दावि गरे । अर्का सदस्य रुपेन्द्र मानन्धरले हाल दैनीक रुपमा सञ्चालन भईरहको पत्रिका अनलाई र सुरु गर्न लागिएको टेलिभिजनलाई संयुक्त रुपमा दोलखामा मिडिया प्रालीले संचालन गर्न लागेको जानकारी गराए । कार्यक्रममा ईगौरीशंकर अनलाईनकी सम्पादक सरुणा श्रेष्ठले मिडियालाई ब्यवसायिक बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन ।
दोलखामा मिडिया प्रालीले जिल्लामानै पहिलो पटक गत वर्षको चैत महिनादेखी ईगौरीशंकर अनलाईन पत्रिका संचालन गर्दै आएको छ । त्यस्तै प्रालीले गत मंसिर ५ गतेदेखी पहिलो पटक जिल्लामा दैनिक पत्रिका दिक्षण प्रकाशन गर्दै आएको छ । मिडिया प्रालीले वार्षिक उत्सवको अवसमा वनभोज कार्यक्रमको समेत आयोजना गरेको छ ।